आज भदौ ३ गते बिहिबार, कस्तो रहला तपाईको दिन ? हेर्नु-होस् राशिफल ! – Nepal Online Khabar
भाद्र २, २०७८ बुधबार 479
कार्य सफलतामा ढिलाई र शारीरिक अस्वस्थताको कारण नि’राश अनुभव गर्नुहुन्छ। अत्यधिक कामको बोझबाट थ’कान र मानसिक बे’चैनी रहनेछ। नयाँ आर्य आरम्भ नगर्नुहोला। खानपिनमा ध्यान राख्नुहोला। योग्य ध्यानबाट तपाई मानसिक रुपले स्वस्थ्य रहन सक्नुहुन्छ।
शारीरिक वा मानसिक ताजगी र प्रफुल्लताको अनुभव होला। कुटुम्ब तथा मित्रसँग घुमफिर एवम् पार्टीको आयोजन हुनेछ। मनोरंजनको लागि सबै सामग्री उपलब्ध हुनेछ। वि’परीत लिंगीय पात्र तर्फ अधिक आकर्षण हुनेछ।
तपाईको दिन खुशी र सफलतामा बित्नेछ। पारिवारिक सदस्यसँग घरमा सुख-शान्तिमा दिन बित्नेछ। पेसा गर्ने व्यक्तिबाट लाभ होला। प्रतिस्पर्धीबाट प’राजित हुनुहुन्छ। स्त्री मित्रसँग भेट होला। स्वास्थ्य स्वस्थ रहला।
पारिवारिक झगडा हुन सक्ला। पारिवारिक सदस्यसँग गलत धारणाबाट बच्नुहोला। मनमा उत्पन्न न’कारात्मक विचारलाई टाढा गर्नु नै ठिक छ। विद्या प्राप्तिमा विद्यार्थीलाई अवरोध होला। अनावश्यक धन खर्च नहोस् यस कुराको ध्यान राख्नुहोला।
दिन सावधानीपुर्वक बिताउनुहोला । अधिक परिश्रम गर्दा पनि कम सफलता मिल्नेछ। पारिवारिक वातावरण अशान्त रहला। अदालती कार्यमा सम्हालेर कदम उठाउनुहोला। धार्मिक तथा सामाजिक कार्यमा भाग लिनुहुन्छ।
पेसा वा व्यवसायमा सफलता पाउनाले तथा उच्च अधिकारीको प्रोत्साहक व्यवहारले अत्यन्त प्रसन्न रहनुहुन्छ। व्यापारीको व्यापार वृद्दि होला। पिता तथा वृद्दको तर्फबाट लाभ मिल्नेछ। मान-सम्मान वा उच्च पद प्राप्त होला।
Prevशुभ समय आउनुभन्दा पहिला मिल्छ यस्तो १० शुभ संकेत, जस्ले बनाउछ मालामाल !!
Nextक्यान्सरको औषधिमा लेखिँदै छ- ‘मेड इन नेपाल’